पूर्व माओवादीबीच एकता प्रयास, प्रचण्डको यस्तो तयारी - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com पूर्व माओवादीबीच एकता प्रयास, प्रचण्डको यस्तो तयारी - खबर प्रवाह
सम्भवतः डा. भट्टराईसँग हुन लागेको उपरोक्त भेटघाट र कुराकानीलाई मध्यनजर गर्दै प्रचण्डले सबै पूर्वमाओवादीहरु एक ठाउँमा आउने वातावरण बन्दै गएको दाबी गरेका थिए।
स्रोतहरुको दाबी के छ भने, माओवादी केन्द्र, जसपा र एकीकृत समाजवादी मिलेर समाजवादी केन्द्र निर्माणको भित्री प्रयास भइरहेको छ।
यही पूर्वपृष्ठभूमिका कारण डा. भट्टराई र यादवले नेतृत्व गरेका दुई दलसहित बृहद वामपन्थी एकताको योजना बनाइएको थियो। १७ असोज (०७४) मा एमाले–माओवादी केन्द्रबीच एकतासहित वाम गठबन्धनको घोषणा हुनु अघिसम्म पनि फोरम र नयाँ शक्ति समेत एकता–गठबन्धनमा सामेल हुने गरी वार्तामा थिए।
तर, दुई कारणले त्योबेला ‘समाजवादी केन्द्र’ निर्माणको प्रयासले सफलता प्राप्त गर्न सकेन।
पार्टी एकता नै गर्ने गरी भएको छलफलमा डा. भट्टराई र यादवले पार्टीको नाम ‘कम्युनिष्ट’ को साटो ‘समाजवादी’ राख्न प्रस्ताव गरेका थिए। तर, ‘कम्युनिष्ट’ शब्दप्रति जनतामा आकर्षण र मोह रहेको बताउँदै एमाले र माओवादी केन्द्रले ‘कम्युनिष्ट’ नाम नै परिवर्तन गरेर ‘समाजवादी’ नामको पार्टी बनाउन तयार भएनन्।
त्यसपछि सुरुमा फोरम यादव एकता प्रक्रियाबाट अलग्गिए।
गोर्खा– २ आफ्ना लागि छाड्न तयार नभएपछि ‘एमाले र माओवादी केन्द्र कम्युनिष्ट ढर्राबाट माथि उठेर समाजवादी केन्द्र निर्माण गर्न तयार नभएको’ आरोप लगाउँदै भट्टराई पनि गठबन्धनबाट अलग भए।
२०७४ को निर्वाचनअघि मूर्तरुप प्राप्त गर्न नसकेको त्यो प्रयासलाई फेरि माओवादी केन्द्र र जसपाका नेताहरुले अघि बढाउन खोजेका छन्।